Chii Chitsva muIOS 15.1 | IPhone nhau
Sezvakaziviswa neApple svondo rapfuura, yekutanga huru yekuvandudza kuIOS 15, iOS 15.1, yakaburitswa nezuro masikati (nguva yeSpanish), imwe update inosvika nayo. zvimwe zvezvinhu zvinotarisirwa zvakanyanya iyo Apple haina kusanganisira mushanduro yekupedzisira yeiyi vhezheni uye mamwe ayo asvika iyo itsva iPhone 13.
Kana iwe uchida ziva nhau dzese izvo zvatove zviripo kuburikidza neIOS 15.1 uye iPadOS 15.1 mushure mekugadzirisa kune yazvino vhezheni yatovepo, ndinokukoka kuti uenderere mberi nekuverenga.
3 Macro basa
4 IPhone 12 bhatiri manejimendi ekuvandudza
5 HomePod inotsigira Lossless Audio uye Dolby Atmos
6 Imba App
7 Rarama mavara paiPad
9 Kadhi rekudzivirira muWallet
10 Kugadziriswa kwepamuviri
11 MacOS 15 Monterey ikozvino yave kuwanikwa
SharePlay ibasa rakagadzirirwa zvinoita kuti vanhu vave pedyo pedyo pamwe chete nekuda kweFaceTime, chiitiko chakazvarwa kubva mukudiwa kweiyo coronavirus denda kuti tirambe tichionana neshamwari uye mhuri.
Ichi chikamu chinobvumira vatori vechikamu kuva vatori vechikamu ridza mimhanzi, nhevedzano uye mafirimu mu sync uye nokudaro kutaura pamusoro payo sokunge vakanga vari pamwe chete mukamuri rimwe chetero.
Uye zvakare, inobvumidza Govera iPhone yako, iPad, kana Mac skrini nemumwe munhu, chinhu chakanakira kuronga rwendo, hangout neshamwari, kubatsira mumwe munhu kuseta kana kugadzirisa mudziyo wake.
Nekuunzwa kweiyo iPhone 13 renji, Apple yakaunza imwe vhidhiyo sarudzo inonzi ProRes, a vhidhiyo yekurekodha fomati rinoshandiswa mukurekodhwa kwehunyanzvi izvo zvinopa kutendeseka kwemavara epamusoro uye kudzika kwevhidhiyo kudzvanya, saka zvishoma ruzivo rwakarasika.
Basa iri inongowanikwa pa iPhone 13 Pro uye iPhone 13 Pro Max, vashandisi vasingakwanisi kunyora chete, asiwo kugadzirisa uye kugovera mavhidhiyo akagadzirwa kubva kumidziyo yavo. Iri basa rinowanikwa mukati meKamera - Mafomati - ProRes application marongero.
Kana iwe uchida rekodhi mu4K pa30 fps, unoda iPhone 13 Pro ye256 GB kana kupfuura., sezvo mune 128 GB modhi yekuchengetedza, basa iri rinogumira ku1080 pa60 fps. Izvi zvinodaro nekuti, maererano neApple, miniti imwe yevhidhiyo mu10-bit HDR ProRes inotora 1.7 GB muHD mode uye 6 GB mu4K.
Imwe yemabasa matsva anowanikwa kuburikidza nekamera yeiyo iPhone nyowani ine iOS 15.1 ndiyo macro. Ne iOS 15.1, Apple yakawedzera switch kune dzima auto macro.
Kana yakadzimwa, iyo Kamera application haizozvichinje kunonoka Ultra Wide Angle kune macro mafoto nemavhidhiyo. Iri basa idzva rinowanikwa mukati meZvirongwa - Kamera.
IPhone 12 bhatiri manejimendi ekuvandudza
iOS 15.1 yakaunza maalgorithms matsva kuziva mamiriro chaiwo ebhatiri, maalgorithms anopa a yakanakisa fungidziro yehuwandu hwebhatiri nekufamba kwenguva pa iPhone 12.
HomePod inotsigira Lossless Audio uye Dolby Atmos
Kwete iyo iPhone chete yakagamuchira nhau dzakakosha neIOS 15.1, sezvo HomePod yakagadziridzawo software yayo ku15.1, kuwedzera kusarasika odhiyo uye Dolby Atmos tsigiro ine spatial odhiyo.
Kugonesa basa idzva iri, tinofanira kuzviita kuburikidza neKumba application.
Wakawedzerwa zvitsva zvinokonzeresa otomatiki zvichibva pakuverenga kubva kuHomeKit-inoenderana nemwenje, mhando yemhepo kana humidity level sensor.
Rarama mavara paiPad
Basa re kucherechedzwa kwemavara, Live Chinyorwa, chinowanikwa kuburikidza nekamera pa iPhone, yave kuwanikwa zvakare paiPadOS 15, chinhu chinokutendera kuti uzive zvinyorwa, nhamba dzenhare, kero ...
Ichi chimiro chinowanikwa pane iPads neiyo A12 Bionic processor kana kupfuura.
Wakawedzerwa zviito zvitsva zvakatorongwa iyo inotitendera kuti tiwedzere zvinyorwa pamifananidzo kana mafaera muGIF fomati.
Kadhi rekudzivirira muWallet
Vashandisi vakagamuchira COVID-19 yekudzivirira vanogona kushandisa iyo Wallet app kuita chengeta uye gadzira kadhi rekudzivirira iyo inogona kuratidzwa pese painodiwa pasina chikonzero chekutakura chitupa chemuviri pabepa.
Iri basa panguva ino inongowanikwa mune dzimwe nyika dzeUnited States.
Yakagadzirisa dambudziko iro Photos application yakaratidza riinhi kuratidza zvisiri izvo kuti chengetedzo yaive yakazara pakupinza mavhidhiyo nemifananidzo.
Dambudziko rakaitika pakuridza odhiyo kubva kune application yaigona kumbomira pakuvhara skrini.
Ne iOS 15.1 yakagadzirisawo dambudziko iro haina kubvumira mudziyo kuona iripo Wi-Fi network.
MacOS 15 Monterey ikozvino yave kuwanikwa
Pamwe chete nekuburitswa kweIOS 15.1, Apple yakaburitsa iyo macOS Monterey yekupedzisira vhezheni, shanduro itsva inosuma zvimwe zvezvinhu zvinowanikwawo paIOS zvakaita seSharePlay.
Parizvino, basa Kudzora kwepasirese, basa rinokutendera kuti uwedzere cheki kubva kuMac kuenda kuPadad, hachipo asi chichasvika mumavhiki anouya, maererano neApple mazuva mashoma apfuura.
macOS Monterey inogamuchirwa Mapfupi, iyo kongiri modhi uye yakavandudzwa Safari yeIOS 15. Iyi vhezheni nyowani inoenderana nemakomputa akafanana neMacOS Big Sur.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 15 » Chii chitsva muIOS 15.1
Apple Fitness + uye Apple One Premiere inowanikwa kutanga svondo rinouya